Izahlulo ze-CO2 Laser, iDiode Laser Ukususwa kweenwele-Haidari
Isine kwi-CO2 laser enye lukhetho olufanelekileyo kwicandelo leCosmetology, unyango kunye notyando. Sebenzisa intloko ekrelekrele ekrelekrele ekhuselekileyo, indawo yonyango inokukhetha imizobo eyahlukeneyo kunyango lolusu, ukupeyinta ulusu, ukususa amanqaku okukhulelwa, ukususwa kwe-melanin; intloko yonyango yentsimbi engenazintsimbi enganyangekiyo, eqinisa ilungu lobufazi, ukusebenza kwe-labia ye-bleaching kuyamangalisa; Ingalo yesikhokelo sokukhanya esidibeneyo esiyi-7, ukujikeleza okungama-360 °, kudityaniswe ne-100 mm yokusika intloko yotyando lwe-laser; Le laser kwamanye amazwe evela USA unamandla ezinzileyo kunye nobomi inkonzo ende.
Ubunjani obuphakamileyo obuphathekayo obuphathekayo be-Laser Vagi ...
Fractional CO2 Laser lobufazi Ukuqinisa Laser M ...
1060nm 4 Isingatha Diode Laser Body Shape Ubunzima Ubunzima ...